SARS-CoV-2 Antibody Kwayedza Strip-SARS-CoV-2 Kwayedza Zvigadzirwa-Sinocare
SARS-CoV-2 Antibody Kwayedza Strip
Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip inokurumidza, yakarurama uye yakapusa poindi-yekutarisira IgM-IgG yakasanganiswa antibody test kit, ichishandisa lateral kuyerera immunoassays, iyo inogona kuona zvine mutsindo IgM neIgG antibodies panguva imwechete kurwisa SARS-CoV-2 hutachiona muropa remunhu mukati memaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu.
(CE yakamisikidzwa, FDA iri kuuya nekukurumidza!)
Incubation nguva yeVirusi ingave ingangoita mazuva gumi kusvika gumi, IgM inogona kuwanikwa mazuva manomwe mushure mekutanga, IgG yaizoonekwa mazuva gumi mushure mekutanga.
1. Li Ping, Li Zhiyong, Chekutanga kudzidza kweserum 2019-nCoV IgM uye IgG antibodies mukuongororwa kweNovel Coronavirus Pneumonia, Taura saChin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452-20200302- 00155
2. Xu Wanzhou, Li Juan, Iyo yekuongorora kukosha kwekubatana kwekuonekwa kweiyo serum IgMand IgG antibodies kune 2019-nCoV mu 2019-nCoV hutachiona, Taura seChin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452- 20200223-00109
Rapid kuonekwa & Simple mashandiro
Iyo nyowani hutachiona, inozivikanwa seSARS-CoV-2 (inozivikanwawo se utachiwana), RNA hutachiona hwemhuri ye beta coronavirus. IgM-IgG yakasanganiswa antibody bvunzo inokodzera kukurumidza kuongororwa uye kuongororwa kwehuwandu hwakawanda hwevanofungidzirwa varwere uye asymptomatic carriers yekudzivirira yechipiri kutapurirana uye kuvimbisa kurapwa kwakakodzera panguva kwehutachiona.
RT-PCR Nucleic Acid Bvunzo
IgG-IgM Antibody Bvunzo
Ropa rese / Serum / Plasma
Kupfuura maawa maviri kusvika matatu
Mukati memaminetsi gumi nemashanu
Chaicho michina inodiwa
Yakajairwa kune nhema nhema
IgM-IgG bvunzo pamusoro pe90%
Kutakura / Kuchengetedza
Yese bvunzo pazvidzidzo zve320, zvinosanganisira mazana maviri nemakumi mana evasina kubviswa, varwere vakasimbiswa makumi matanhatu uye makumi maviri akarapwa varwere.
Negative chirevo chinowirirana chiitiko (- / -)
Yakanaka chirevo chinowirirana chiitiko(+ / +)
Zvinonzwisisika maitiro & Vzviri zviviri result
1. Chii chinonzi SARS-CoV-2 & Virus?
Utachiona hwenoverengeka, hwava kunzi SARS-CoV-2, hutachiona hweRNA hwe b novel coronavirus strain, inotarisira denda repasirese repasi rose. SARS-CoV-2 inokonzera chirwere chinonzi Virus.
2. Chii chinonzi Sinocare SARS-CoV-2 test strip?
Iyo IgM-IgG yakasanganiswa bvunzo tambo, inoshandiswa kuratidza zvine mutsindo IgG uye IgM antibodies enoveli coronavirus muvanhu serum, plasma kana yakazara ropa mu vitro.
3. Ndinofanira here kuita iyo SARS-CoV-2 bvunzo?
Inogona kushandiswa kukurumidza kuongorora kwevatakuri vehutachiona hunoratidza kana hunoratidza.
4. Inokurumidza sei Sinocare's SARS-CoV-2 bvunzo?
Inongoda 15-20 maminetsi.
5. Zviiko zvinondiudza?
(1) Mhedzisiro Yakashata: Kana chete mutsetse wekudzora mhando (C) uchionekwa uye tambo dzekutsvaga dzisiri kuoneka, saka hapana novel coronavirus antibody yakaonekwa uye mhedzisiro yacho yakaipa.
(2) Mhedzisiro Yakanaka: Mitsara miviri mitsvuku inoonekwa. Mutsetse mumwe unofanirwa kunge uri munzvimbo yekudzora (C) uye mumwe mutsetse unofanirwa kunge uri munzvimbo yekuyedza (T) inoratidza kuti mhedzisiro yakanaka kune ese maIgG ​​neIgM antibodies.
(3) Haisiyo: Dambo rekudzora rinotadza kuoneka (Ona mufananidzo 2). Mhedzisiro yekuedzwa haishande.
6. Kana ndichida zvakawanda, unogona here kuzadzisa zvandinoda?
Hongu, tinogona kuwedzera yedu chikero kugadzirwa kusangana zvido zvako, ndapota simbisa yako odha pachine uye yedu zvichachinja nguva inenge vhiki rimwe.
SARS-CoV-2 Antibody Kwayedza Strip (Colloidal Goridhe Maitiro)
Kudonhedza 1 (10μl) reropa rose / seramu / plasma
25 mitsetse / bhokisi; 5 mitsetse / bhokisi
Chengetedza pa4℃~ 30℃ mune iyo foil punch, chengetedza kure nezuva rakananga, hunyoro uye kupisa. Usagwamba.